IBM zụtara Red Hat maka $ 34 ijeri. | Site na Linux
E wepụtara akụkọ a n'oge na-adịbeghị anya nke ahụ tụrụ onye ọ bụla anya na ọ bụ na IBM zụtara Red Hat maka ihe ọ bụla karịrị nde 34.000.
Dabere na IBM, Onyinye a di onu ahia na $ 190 kwa uzo Red Hat. IBM CEO Ginni Rometty na-ahụ IBM dị ka onye na-enye nọmba nke ngwakọ ngwakọ ngwakọ.
International Business Machines, ma ọ bụ IBM bụ ụlọ ọrụ United States gbadoro ụkwụ na mpaghara sayensị kọmputa.
Companylọ ọrụ a bụ onye ochie na mpaghara teknụzụ ozi, dị ka ọ bụ otu n'ime mmadụ ole na ole na-aga n'ihu akụkọ ihe mere eme na narị afọ nke XNUMX.
Red Hat, Inc. bụ ụlọ ọrụ United States, na-enye ngwọta dabere na sistemụ arụmọrụ Linux, gụnyere Red Hat Enterprise Linux, na mgbakwunye na ngwanrọ ngwanrọ ndị ọzọ.
Ugbu a, cheedị ihe ga - esi na njikọta nke ụlọ ọrụ abụọ ahụ ... nke ọma, ịkwesighi iche n'echiche, nke ahụ abụrụla eziokwu.
1 Banyere IBM zụrụ Uhie.
1.1 Red Hat ga-aga n'ihu na-eme onwe ya nke IBM
Banyere IBM zụrụ Uhie.
Mgbe nnweta ahụ, Red Hat ga-abụ ihe dị iche iche na otu igwe ojii igwekota nke IBM.
Nke a kwesịrị ije ozi iji chekwaa ụdị ihe eji emeghe Red Hat.
Onye isi Red Hat Jim Whitehurst ga-aga n'ihu na-eduzi ngalaba ọhụrụ ahụ, na-akuko ozugbo na IBM CEO Ginni Rometty dika onye otu ndi isi ulo oru IBM. Ndị otu ndị otu Red Hat ga - anọ, IBM kwuru.
Kọmitii nlekọta nke ụlọ ọrụ abụọ ahụ akwadola ahia ahụ. Nkwenye nke ndị nwe Red Hat ka na-efu.
Nkwado ndị dị mkpa sitere na ntụkwasị obi na ndị na-achịkwa iwu na-echere. IBM na-atụ anya ka mezue nkwekọrịta ahụ site na etiti 2019.
IBM eruola nkwekọrịta nke ọ ga-akwụ US $ 190 maka ụgwọ Red Hat, nke na-anọchi anya ntakịrị karịa 60% nke ọnụahịa nke mbak na njedebe nke mgbanwe ngwaahịa na Fraịde gara aga.
Emegharịrị usoro a n'oge izu ụka a.
Red Hat ga-aga n'ihu na-eme onwe ya nke IBM
Ya mere, nnukwu ụlọ ọrụ ngwanrọ na-emepe emepe na-aghọzi ụlọ ọrụ azụmaahịa IBM n'ime ngwakọ igwe ojii, dịka onye isi ụlọ ọrụ Jim Whitehurst ga-esonyere ndị otu njikwa IBM.
Ginni Rometty, Onye isi ala, Onye isi ala na onye isi nke IBM (n’aka nri). Jim Whitehurst, Onye isi oche okpu
Na ntọhapụ gị, Red Hat kwuru ihe ndị a:
“Iningbanye na ibm ga-enye anyị ọkwa dị elu, akụrụngwa na ikike iji mee ka mmetụta nke isi mmalite dịkwuo ngwa dị ka ntọala maka mgbanwe dijitalụ ma weta okpu na-acha uhie uhie na ọbụna ndị na-ege ntị, na-echekwa ọdịbendị anyị pụrụ iche na mkpebi siri ike imeghe ihe ohuru. «
Red Hat ga-anọrọ onwe ya ma rụọ ọrụ dị ka ihe dị iche na otu IBM Hybrid Cloud team.
Igwe ojii ngwakọ bụ ọrụ jikọtara ọnụ na-eji igwe ojii, ma nke ya ma nke ndị ọzọ, iji dozie ọrụ dị iche iche n'ime nzukọ.
Ọrụ mgbasa ozi pan-European nke Interoute na-egosi na e nwere ụzọ atọ iji mejuputa ụdị igwe ojii ngwakọ:
Mmekọrịta dị n'etiti ndị na-eweta igwe ojii dị iche iche iji nye ọrụ nke jikọtara atụmatụ igwe ojii na nke onwe dị ka ọrụ jikọtara ọnụ.
Ngwakọ ngwakọ ngwakọ zuru ezu nke otu igwe ojii na-eweta ọrụ.
Otu ndị na-ahazi igwe ojii nke onwe ha nke na-emezigharị ọrụ igwe ojii ma mechaa jikọta ya na akụrụngwa ha.
Ginni Rometty, onye isi oche na onye isi oche nke IBM, kwuru ihe ndị a:
“Inweta okpu na-acha uhie uhie bụ ihe mgba okpuru. nke a gbanwere ihe niile n'ahịa igwe ojii. ibm ga - abụ igwe ojii ngwakọ igwe ojii zuru ụwa ọnụ, na - enye ụlọ ọrụ naanị ihe ga - eme ka igwe ojii mepee ọnụ ahịa ha. "
Jim Whitehurst, onye isi oche nke Red Hat, bipụtara otu isiokwu banyere isiokwu a, na-ekwupụta ohere ọhụụ ọhụụ meghere maka ụlọ ọrụ ahụ na-aga n'ihu n'ime IBM yana ihe mmeghe yana mpaghara ụlọ ọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » IBM zụtara Red Hat maka $ 34 ijeri.
Dezie metadata gị MOV faịlụ na MOV MetaEdit